Shimbiri Laba Geed Ma Wadda Gurato (Abdi-Shotal)! – somalilandtoday.com
Shimbiri Laba Geed Ma Wadda Gurato (Abdi-Shotal)!
Isu daran u wadda daran, ka u daran intaw daran, kala daran ka ug6u daran, ku darmaday ka noo daran, isaguna isuba daran, naftii-suna u daran tahay, ka daraha ka sii daray,ma cid baw daraanayn, ummaday-su wadda daran. kaa si waa Faysal Zaad, oo sidda cinjirka la kala jiid-jiido, mawqif iyo mab’da midna aan ku socon. bal la yaabka jira, wixii hore soo dhaaf oo waxay noqona-yaan jano, ee bal waakii heshiis uu la galay Waddani, inta uu soo saxeexay, in laba qodob oo kala ah:-
(a) Laba xubnood loogu daro Mucaaridka, waa Ururka uu hor boodo ee uu ku magacaabo Ucid iyo
(b) Xusbiga Waddaniye,
oo mid xubno dheeraad ah, laga siiyo Komishan ku sheega meesha walaaqaday, ee maamulka askarta u adeega’e.
(c) Qodobka kale oo isna ah in la kala diro siday u dhan yihiin, kuwani wax ka xun intii hore bay soo wadaane, waa in la yidhaaho wadadda caba.
Qofka aan qawlka lahayni, ee ujeedo badanka ahi, waa ruux ku raad gadanaaya arimo kale oo u qarsoon, ilaa intuu taa dhul sugaayo-na, wuxu isku qariyaa ciiro, oo wuxu iska dhigaa mid u daacad ah, dalka iyo dadka. marka uu hello ama gaadho halkii u darayd-na, ee carrabka loo qooyo, sidiisii buu isku laba rogaa kii uu heshiiska la galay, ilayn waxa shaqaynaaya, waxoogaaggii gacanta loo saaraye. Hadaba kan saddex wajiilaha ah ee Faysal Zaad, waa nin bilaa mawqif ah, oo ku shaqeeya kolba waxa loo dhiibo, mana aha sidda uu ku sheekeeyo ee ah, danta Somaliland baan ka taliyaa, iyo wax uu ku sheego isu tanaasil, taas oo ah huf iyo been aanay wax-ba ka jirin.
Xikmad Somaliyeed, oo ku jirta suugaan-teena dhanka heesaha lagu luuqeeyo, weliba ciyaarta loo yagaano saylacaa-wigga, baa waxa ka mid ah, ereyo sheegaaya in uu qofku meel isi soo taago, ee aanu sidda carsaan-yadda badda kolba dhan isku qaadin, waxay tahay murti-daasi ” Shimbiri laba geed, ma wadda guratee, idina laba guri mid uun dega”. Faysal Zaad waxan leeyahay, ummadu ku bartay, adna waad is og-tahay, in ay madaxnimo inta cirku kuu jiro, ay saddex laab (Squarely Cubic),kaaga sii fog tahay, waana kii Siilaanyo Saacadahii “UFTa” Waa saqdda dhexe, ku lahaa ummadu sankay kaa qabsatay, oo ku dooni-mayno bay ku tidhi. Waxa uu sidaa kuu lahaana, may ahayn wax kale, ee wuxu arkay, ayaantuu wax ma hayo ku yidhaaho-na in aad guudka uga baxdo, markuu khaati kaa joog-sado ee aad indhaha isku soo qabato-na, waa kii kuu tuuri jirey, waxa aad eeday ee halkaa kugu jilib-xidhay, siddii hal iib ah, oo sayladda la keenay, si aanay u baxsan.
Hawlka karantiyo, hilaac-yadda gu’ga, iskuma heshide, mid uun ku hagaag, oo miduun ku hab-dhabo. Waxad tahay saxar dabayli kolba dhinac u tuurayso’e. markaad guri hoostii aad hesiis ku soo gasho-ba, debedda markaad u soo baxdo, af kale baad ku hadlay-saaye, mar kee baad waalan tahay ama sax tahay,? ma mucaarid baad tahay mise muxaafid? Dhankee loo raacaa? Wadaadkan carrabka la’ ( Waa Faysal Zaade) wax weyn baa ka siya? ee Sheekh Rusheeye u geeya, ha furdaamiyo’e kuwa ka daba ceeshaw ( Sidda Ramaax), oo isna leh sifihii islaantii tidhi ” Allaw Dooro Ruqsay”. Markuu u galay Mr Zaad weeyee, isna xaal-kiisu waa ” Dooni-yahay waa kugu wadda jirnaa nala jab.
Midda kale, Wuxu isku maaweeliyaa, gudoomiye baad u tahay Xusbi, ee miyaanu cid-naba la tashan? Miyaan taladda lala lahayn? Markii hore-ba isaga oo bacaadka haysta, baa Illaah u saaray Jamaal Cali Xuseen in uu soo baxo. Ma Is weydiiyeen weli kuwa dadka u haystaa , horta haba isi soo sharaxee, dhanka maskaxdda ma ka caafimaad qabaa? oo ruux fayaw ma yahay Faysal Zaad? Qofkan miyaan xaal-ba qaban? Waxa hubaal ah, in ay wax weyni, oo aan dawadeedda la hayni ay ku qaloocan yihiin, kaas oo ah hunguri hamuun dhaafay. Hungrina qofka is yidhaaha qabo, waa mid isaga ka sii daran, waayo waxa joojin kara oo keliya, wax uu afka geliyo, meel kale oo loo badh-baadhayaa ma jirto, ee ruuxa bahal-kaasi qaataa wuu la god galaa. waxan ku soo xidhay qoraalkan, kuwa Faysal Zaad ka sugaaya in uu wax helaw, been baad isu sheegteen, ee inta goori-goor tahay, ka dhaqaaq, haddii kale inta yar ee loo soo tuuro la burburi, oo yuu intaasna kaa qadin.
N.B Dooni-Yahay Waa Kugu Wadda Jirnaa Nala Jab.